In passportka qof wadanka dhalashadiisa haysto lagu qoro (ukjent) waxay noqon kartaa sharci daro - NorSom News
In passportka qof wadanka dhalashadiisa haysto lagu qoro (ukjent) waxay noqon kartaa sharci daro
Advokat Arild Humlen. FOTO: LARS EIE / NRK
In qofka ka yimid 31 wadan ee passporka cusboonaysiisanayo loogu qoro (ukjent) meesha dhalashada ayaa noqon karta mid aan waafaqsaneyn sharciga iyo qanuunka Norwey, sida uu sheegay Arild Humlen oo ah qareenka(abuu-kaataha) dhowr qoys oo dhib kasoo gaartay in passportkooda lagu qoray (ukjent). Humlen ayaa sheegay in booliska Norwey aysan sharci difaacanaya arintaas haysan, sidaas darteedna ay noqon karto mid baal-marsan qanuunka wadanka.
Qareenkan ayaa sheegay inay lasoo xiriireen dhowr qoys oo loo diiday inay wadanka ka dhoofaan sababtoo ah waxaa passportkooda ku qoran in aan la garaneyn meesha ay ku dhasheen.wuxuu kaloo intaa ku daray inay jiraan dhowr qof oo macaamiishiisa kamid ah oo dhalashada wadankan haysto, laakiin ku dhashay wadan kale oo cabsi qaba cawaaqibta ka imaan karto arintan.
Booliska Norwey ayaa dhankooda diiday inay arintan dhib ka imaan karto, marka uu qofka galayo ama kasoo dhoofayo wadan kale. Hadii ay jiraan dad xuduud wadan kale lagu qabsadeyna ay si fudud ula soo xiriir karaan dowlada Norwey, si fududna lagu cadeyn karo in passporka qofkan uu yahay mid sax ah. Dhibta ugu weyn ee arintan ka imaan kartana ay tahay cabsida in wel-welka uu qofka isku abuurayo, niyad ahaan.
Xildhibaan Baashe Muuse oo kamid ah dadka uu tvga qaranka Norwey ee NRK uu arinta wax ka waydiiyay ayaa sheegay in ay dadku ka cabsi qabaan in uu passportkooda noqdo mid ka qiimo hooseeyo kan dadka kale, uuna noqdo (klasse 2 passport) maadaama ay (ukjent) ku qorantahay meesha dhalashada. Wuxuu kaloo baashe ku daray intaas in wax laga dhakafaaro ay tahay in aan wax digniin ama warbixin ah laga siin arintan dadka ay khusayso, kadib markii sharciga la badalay.
Arintan ku saabsan in qofka (ukjent) loogu qoro meesha dhalashada oo ay warbaahinta NorSom News soo bandhigtay 5-juni ayaa shalay ilaa maanta noqotay mid aad ugu faaftay warbahinta waaweyn wadanka oo dhan, iyada oo abuurtay doodo aad u badan xaga sosial mediayaha. Maadaama ay arintu khusayso dadka ka yimid 31 wadan oo ay kamid yihiin jaaliyada wadanka aad ugu xoogan , siyaasadana si fiican ugu dhex muuqda, isla markaan leh dad mideysan oo u u hadla marka ay dhibi soo gaarto, ayaa hada u eg mid culeys weyn ku keentay wasaarada cadaalada iyo maamulka booliska Norwey. Jaaliyadahaas waxaa kamid ah Pakistan oo baarlamaanka Norwey ku leh ilaa 3 xildhibaan, Veitnam, Iran, Srilanka iyo Somalida oo dhankeeda dadaalayso.
warbixinta NRK-ga halkan ka akhri(les saken på norsk her)
Previous articleFasax ayaan rabnay inaan Kenya u aadno, balse dadka dhan waxay u malaynayeen in la isoo gudi doono
Next articlePolitidirektoratet oo raali galin bixiyay dib u eegisna ku sameyn doona arinta (ukjent)